I-Raw Alpha GPC powder (28319-77-9) Abakhiqizi - Phcoker Chemical
i-alpha-GPC (i-L-Alpha glycerylphosphorylcholine, i-choline alfoscerate) i-......
I-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) powder (i-28319-77-9) ividiyo
I-Alpha-glycerylphosphorylcholine (i-alpha-GPC, i-choline alfoscerate) iyinhlanganisela ye-choline yemvelo etholakala ebuchosheni. Ibuye i-parasympathomimetic i-acetylcholine isandulela esingase ibe nekhono lokwelapha isifo se-Alzheimer kanye nokunye ukuwohloka komqondo.
I-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) i-powder ikhulula ngokushesha i-choline ebuchosheni kuwo wonke umkhawulo we-blood-brain and is precursor biosynthetic ye-acetylcholine. Kuyinto imithi engavumelekile emazweni amaningi.
EYurophu i-alpha-GPC imithi yokwelapha yokwelashwa kwesifo se-Alzheimer s. E-United States i-alpha-GPC itholakale kuphela njengesengezo sokudla, ikakhulukazi kumikhiqizo ekhuthazwayo ukuze ithuthukise inkumbulo.Eminye imisebenzi ye-alpha-GPC ihlanganisa ukwelashwa kwezinhlobo ezihlukahlukene zokuhlukumeza komqondo, ukushaywa isifo, kanye "nokushaywa komzimba" (ukuhlaselwa kwe-ischemic okudlulayo, i-TIA ).
I-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9) Siziqu
Igama Product I-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) powder
Igama leKhemikhali I-Choline Alfoscerate; I-Alpha GPC; I-Alpha-glycerylphosphorylcholine; I-Choline glycerophosphate
Brand NAme Ayikho idethi etholakalayo
I-Drug Class i-acetylcholine ye-parasympathomimetic
CAS Inombolo 28319-77-9
I-molecular Fi-ormula C8H20NO6P
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-257.223 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic I-257.103 g / mol
Ukuxuba Pi-oint 142.5 ° C
Ukuqhwayiza Point Ayikho idethi etholakalayo
I-Half Half-Life I-Alpha GPC isigamu-impilo iphezu kwamahora angu-4-6 kodwa kuthiwa iphakame ngaphakathi kwamahora we-1-2 wokungenisa
Color I-powder eqinile
Sukuhlushwa Tukushisa I-0 - 4 ° C okwesikhashana (izinsuku kuya emavikini), noma -20 ° C isikhathi eside (izinyanga).
Aukuphikisana I-Choline Alfoscerate isetshenziselwa ukwelashwa kwezifo ze-Alzheimer kanye nokunye ukuwohloka komqondo.
I-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9) Incazelo
I-Alpha GPC yigama elivamile le-L-Alpha glycerylphosphorylcholine, i-nootropic ye-cholinergic eyenzeka ngokwemvelo kodwa ingabuye ithathwe njengesengezo. I-Alpha GPC i-powder iyaziwa ngokusheshisa ngokukhululeka nangokuthembekile kokukhipha u-choline ebuchosheni ekudalweni kwe-cognition-okukhuthaza i-neurotransmitter acetylcholine.
Inezinzuzo ezinamandla kokubili ubuchopho nomzimba futhi ingathuthukisa uhla oluphelele lwemisebenzi yokucabangela, ukukhuthaza impilo yeselula, nokusiza ukugcina ibhalansi ye-neurochemical ebalulekile ebuchosheni.
I-Alpha-GPC ikhulula ngokushesha i-choline ebuchosheni kuwo wonke umkhawulo we-blood-brain and is precursor biosynthetic ye-acetylcholine. Kuyinto imithi engavumelekile emazweni amaningi. I-FDA inqume ukuthi ukungena kwe-196.2 mg / umuntu / usuku kuthathwa njenge-GRAS. Emazweni athile aseYurophu, ilawulwa njengomuthi wezokwelapha futhi esetshenziselwa ukwelashwa kwesifo se-Alzheimer's.
I-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9) Indlela Yokusebenza?
I-Alpha-GPC isekela sonke isimiso sezinzwa ngokuthuthukisa i-acetylcholine nomsebenzi we-cholinergic. Kungase futhi kuphakanyiswe amazinga ezinye izithunywa zokuvikela ubuchopho ezifana nalokhu:
Ngaphezu kwalokho, njengoba kushiwo, kungase kukhulise amazinga e-hormone yokukhula kanye.
Izinzuzo we-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9)
Imemori Ethuthukisiwe nokuCognition Ethuthukisiwe
Ithuthukisa ukubuyiswa kwesisu
Kukhuthaza ukusebenza kwezemidlalo, amandla okukhula nokuvuselela okusheshayo kokuthunyelwa komsebenzi
Kwangathi Kungathuthukisa Amehlo
Kwangathi Ngingavikeleka Emelene Nomswakama
I-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) ephakanyisiwe (i-28319-77-9) Isikali
I-Alpha GPC iphathelene ne-40% ye-choline ngesisindo. Ngakho i-1,000 mg ye-Alpha GPC powder inikeza cishe i-400 mg ye-choline.
I-Alpha GPC isilinganiso esilinganisiwe sezinzuzo zokucwaninga yi-250-1,200 mg ngosuku. Nakhu ukuphazamiseka kwemigomo yokulinda:
Isifo se-Alzheimer kanye nokuwohloka komqondo: 400 mg, 3X nsuku zonke ngezinyanga ezingu-6 - 12.
Ukutakula kwesisu: 1,000 mg nsuku zonke ngenyanga ye-1 (njengemijovo).
400 mg ngomlomo, 3X nsuku zonke ezinyangeni ze-5 kamuva
Ukusebenza kwezemidlalo: 250 mg nsuku zonke ngeviki le-1 
600 mg nsuku zonke ngezinsuku ezingu-1 - 6.
Ubuso: 400 mg, 2X nsuku zonke ngezinyanga ze-2.
Ngokusho kobufakazi be-anecdotal, umthamo weziphumo ze-nootropic ububanzi kusuka ku-400 kuya ku-1,200 mg / ngosuku. Ungase ufune ukuqala ekugcineni okuphansi bese ulandelela impendulo yakho.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo we-Raw Alpha GPC (i-Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9)
I-Alpha-GPC powder yayiphephile kuzo zonke izilingo zomtholampilo. Ngengxenyana yeziguli, kubangele imiphumela emibi njengale:
Ekufundeni ngokuphepha kwezinja namakhofu, i-megadoses (kuze kufike ku-3,000 mg / kg) yanciphisa kancane umsebenzi wezilwane. Abacwaningi baphetha ngokuthi ukusetshenziswa kwe-alpha-GCP yama-26 mg / kg (ngaphezu kwe-150 g nsuku zonke kumadoda amadala) akuthinteli izingozi zempilo.
Ngenxa yokuntuleka kwedatha yokuphepha, izingane nabesifazane abakhulelwe bangase bafune ukugwema i-alpha-GPC.
I-9-Methyl-9H-beta-carboline powder (2521-07-5)